MOSA အဖွဲ့ ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် သင်တန်း ပြည်မြို့ တွင်ဖွင့်လှစ်.. ~ ဒီမိုဝေယံ
MOSA အဖွဲ့ ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် သင်တန်း ပြည်မြို့ တွင်ဖွင့်လှစ်..
MOSA အဖွဲ့ ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် သင်တန်း ပြည်မြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်..
MOSA (Myanmar open eye social Actions ) အဖွဲ့ သည် 2012 ခုနှစ် 7လပိုင်း 13, 14,15 ရက်နေ့များတွင် ဟင်္သာတမြို့ တွင် စတင်သင်တန်းများ ပေးခဲ့ပြီး.. ရန်ကုန်မြို့ နာရေးကူညီမှုအသင်းတွင်လဲ 2012720,21.22 များတွင် ၃ရက်တိုင်အောင် သင်တန်းများ ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ်ပြုလုပ် ပေးခဲ့သည်။ 2012 .7.28 ရက်နေတွင် ပြည်မြို့နယ်. ရတနာမာန်အောင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း (မိုးမေတ္တာ ပရဟိတလူငယ် သွေးလှုရှင်များ အသင်းမှ) ဖိတ်ကြားသဖြင့် လာရောက် သင်တန်းပေးရသည်ဟု MOSA အဖွဲ့သားများမှ ပြောကြားပါသည်။ သင်တန်းပို့ချသည့် ဘာသာရပ်မှာ(၅)ခုဖြစ်သည်ဟု အဖွဲ့ ဝင်များက ပြောပါသည်။
(Journalism & Citizen Journalism ) (Human Right & Internet Freedom ) (International Relation & Political Science) (Civil Society) (Information Technology) ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားမည် ဖြစ်သည်ဟု MOSA အဖွဲ့ ၏ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအလင်းဆက်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုသင်တန်းသို့ ကိုအလင်းအဆက်.(IR) ကိုအောင်နီဦး(IR) ကိုမင်းမင်း(IT) တို့မှ လာရောက် သင်ကြား ပို့ချခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုအလင်းဆက်မှ ထပ်မံပြောကြားသွားပါသည်။ ယခုသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား ၃၀ခန့်တက်ရောက် လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်..။
(မှတ်ချက်.......MOSA အဖွဲ့အား ဆက်သွယ်လို ပါက..
တို့ အားဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် )
သတင်းဓါတ်ပုံ ...နှင့်သတင်း ( သားစိုးလေး)